Pfungwa Kuedza: Ongororo dzepamhepo
Pfungwa Kuedza 2.0
Muvhuro, Zvita 19, 2011 Svondo, October 4, 2015 Hanna Johnson
Kugadzira kuongorora kwepamhepo inzira inokurumidza, yakapusa yekusvika kune vako vatengi kuti vawane maonero avo pane chero chinhu. Basa rangu pa Zoomerang Online Ongororo uye Polls zvinogona kundiita ndakarerekera, asi ini ndinofuridzirwa nezvinhu zvese zvinotonhorera zvaunogona kuita neongororo. Mazuva ano, iwe une matani esarudzo sarudzo, kubva kuisimbisa mune yako saiti, kuitumira kuburikidza nemavara kune vanhu mafoni, kuigadzira uye kuitumira kunze chaiko muFacebook.
Changu chandinofarira cheaya anotyisa kugona ndechimwe chezvinhu zvedu zvitsva. Iyo inokutendera iwe teedzera mufananidzo wechero hupamhi nekukwirira, unosvika mazana maviri nemakumi maviri nesere muhukuru hwefaira, muongororo yako. Kunze kwenzira dziri pachena dzinotyisa dzaungashandisa chinhu ichi kuita kuti ongororo yako ive yakanaka, ifukidze mu logo yako, kana kuwana maonero eboka pamapfekero emwenga, chiitiko ichi chinobvumidza kuyedzwa kwepfungwa zvisati zvamboitika.
Pfungwa yekuyedza ndiyo nzira yekuongorora mhinduro yevatengi kune chigadzirwa, brand, kana zano risati raunzwa kumusika. Inopa inokurumidza uye yakapusa nzira yekuvandudza chigadzirwa chako, kuona zvingangodaro matambudziko kana zvikanganiso, uye ita shuwa kuti mufananidzo wako kana brand yakanangwa zvakaringana Iwe chete unofanirwa kutarisa kusvika paNetflix, Qwikster debacle kuti unzwisise kukosha kwekukumbira pfungwa dzevatengi vako pamberi tichiita sarudzo hombe…
Ongororo dzepamhepo inzira huru yekufunga bvunzo, uye iwe unogona kuishandisa kunetseka kupfura kune ese marudzi ezvinyorwa. Heano matatu:
Logo kuyedza: Isu tese tinoziva kuti kukosha kwekuita logo izvo zvisingakanganwiki uye zvakanyatsoenderana nechako chiratidzo. Uchiri kuyedza kusarudza iyo chaiyo yekuzvimiririra? Paunenge iwe wagadzira logo uye woiisa kunze kwenyika mukubatana neako brand, zvinogona kuve padyo nekusagone kuchichinja uye kuzvimisazve zita rako Ndosaka zvakakosha kuti utange chiratidzo chey logo usati waisa logo.
Ratidza yako yekutora inotora akasiyana logo sarudzo, uye uvabvunze kuti ndeapi manzwiro uye maitiro iyo logo inoendesa kwavari. Iwo marogo awasarudza anoratidza chako kambani basa uye tsika? Tsvaga usati wasarudza logo, kwete mushure.
Ad / yekuvhara mhinduro: Dhinda yekushambadzira inokumisikidza iwe peni yakanaka, saka iwe unoda kuve nechokwadi kuti yashandiswa zvakanaka. Gadzira ongororo nemifananidzo yezvishambadziro zvaungade kushandisa, uye zvivaedze pane vateereri vakasiyana. Tsvaga zvinotaurwa neshambadziro yako kwavari. Ndeapi mapikisheni avanobatana neako brand kana chigadzirwa zvichibva pachiziviso? Shambadziro inoita kuti vanzwe sei? Iyo yakawanda mhinduro iwe yaunogona kuwana nezveshambadziro yako kubva kuongororo yako, zvakanyanya mukana wekuti kushambadza kuchazadzisa chinangwa chako.
Saizvozvowo, kuisa mifananidzo muongororo yako yepamhepo inzira huru yekuona kuti kavha yako iri kuita uye inoshanda. Ndiani anonyanya kufadza (uye nekudaro anokwanisa kutyaira kutengesa) kune vako vaverengi, Lady Gaga kana George Clooney? Kufungidzira zvisirizvo kunogona kutora mutero wakakomba pamari yako yemubhadharo, saka edza yako yekuvhara chifananidzo, misoro yenyaya, uye nenyaya huru dzenyaya usati wazvipira kune imwe.
Webhusaiti Dhizaini Mhinduro: Kugadzirisazve webhusaiti yako rinogona kunge riri basa rinotyisa, uye zvinogona kuve zvakaoma kuziva kuti shanduko dzauri kuita dzinoshanda here kana vachingo pedza nguva nemari. Isa mifananidzo yemadhizaini muongororo, uye bvunzo kushandiswa, mameseji uye kufamba kweyakagadzirwa nyowani. Bvunza mibvunzo yakaita seiyi: "Chii chaunorangarira zvakanyanya nezve dhizaini yawangoona?" "Unofunga kuti kambani iyi inoitei?" "Ungabaya kupi kuti udzidze zvakawanda nezve kana kutenga chigadzirwa?" Iyo yakawanda mhinduro iwe yaunowana nezve yako dhizaini kubva kuongororo yako, zvinowanzoita kuti dhizaini izadzise zvinangwa zvako.
Ongororo yepfungwa ndiyo inokurumidza, yakapusa nzira yekuita chokwadi chekuti mufananidzo wauri kushandisa ndewechokwadi, kunyangwe iri yeyako logo, shambadziro, webhusaiti, kana kavha. Usatambise nguva nemari pazvifananidzo zvisingataure zvaunoda ivo. Tumira ongororo yepfungwa yekuedza pfungwa 2.0. Vose vatengesi vakangwara vari kuzviita.
Tags: kuongorora kwepfungwapfungwa yekuyedzapfungwa yekuyedza kuongororatsvakurudzo
Hanna ndiye weSocial Media Marketer ye SurveyMonkey. Kuda kwake zvinhu zvese zvemagariro kunowedzera kupfuura iye Tweet rwizi. Iye anoda vanhu, nguva yekufara, uye mutambo wakanaka wemitambo. Akaenda kukondinendi yega yega kunze kweAntarctica, asi ari kushanda pane izvo ...
WordPress Multi-Domain Kupinda zvishwe
Yenhoroondo Mutengo Wenhare mbozha